Baadhitaanadaasi waxay ku saleysan yihiin macluumaadka ugu fiican ee la heli karo waqtigan. Waxay ku saleysan yihiin ilo kala duwan oo aan soo ururiyey sanado badan, waxaana si joogta ah dib loo eegayaa. Waxaan ku faraxsanahay inaan u soo bandhigo liistooyinkaan inay adeeg u yihiin shakhsiyaadka shimbiraha, laakiin waxay ku xiran yihiin heer aan sax ahayn. Haddii aad aragto qalad, fadlan ha ka waaban .
Bird Checklists of the World waa qayb ka mid ah Avibase iyo Bird oo isku xirta adduunka, kaas oo loo hindisay ama dayactiray Denis Lepage, oo ay marti gelisay Bird Studies Canada, oo ah wada-wadaagga Birdlife International.
Meel khariidad saar khariidada
Muuji liistada hubinta: Wadamada / dhulalka / gobollada Ku dar gobalka / gobollada Muuji dhammaan boggaga
Ku qor magacyada gobolka:
Avibase ayaa la booqday 288,457,797 jeer laga bilaabo 24 Juun 2003. © Denis Lepage | Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah